लकडाउनमा राति १ बजे टिप्परमा जाने निधो गरे तर बाटोमा बच्चाकै अगाडी जे-जे गरे… – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनमा राति १ बजे टिप्परमा जाने निधो गरे तर बाटोमा बच्चाकै अगाडी जे-जे गरे…
लकडाउनमा राति १ बजे टिप्परमा जाने निधो गरे तर बाटोमा बच्चाकै अगाडी जे-जे गरे…
भदौं २६ गते काठमाडौंबाट धादिङ जाँदा मध्यरातमा जे घटना भयो, त्यसले सबैको होस उडाएको छ । एक महिला आफ्ना बच्चाहरुसहित लकडाउनका बीचमा रातिको १ बजे धादिङ, सिम्लेका लागि काठमाडौंबाट टिपरमा घर जाने भइन् । बाटोमा केही पनि नभएको उनी बताउँछिन् । तर बीचमा साहुले चाल’कलाई झार्यो ।
‘नौबीसे भन्दा केही माथि टिपर रोकेको थ्यो, त्यहाँ म चर्पी गएकी थिँए । त्यसपछि साहुले गाडी चलाउन थालेका थिए । म बच्चाहरुसहित टिपरमा बसे.. एक महिना पहिलेको घटना हो । राति–राति आउँनुपर्ने का’रणबारे ति महिला भन्छिन्, ‘लकडाउन थ्यो, गाडी चलेको थिएन् । टिपर चलाउन दिएको थ्यो । पहिला चालकसँग पनि आउँने जाने गरेको थियो । मकै भाँच्नुपर्ने र घरमा कोही नभएको हुँदा श्रीमानले राति–राति नै भए पनि जानलाई अ’नुमति दिएका हुन् । चालक मेरो ठुलो आमाको छोरा हो ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘नौबीसे भन्दा केही माथि टिपर रोकेको थ्यो, त्यहाँ म चर्पी गएकी थिँए । त्यसपछि साहुले गाडी चलाउन थालेका थिए । म बच्चाहरुसहित टिपरमा बसेकी थिए । राति १ बजेर ११ मिनेटमा काठमाडौंबाट हिड्यौ र राति ३ बजेर ३० मिनेटमा घ’टना भएको ठाउँ पुग्यौ ।घटना भएको ठाउँमा पुग्दा साहुले मेरो ममीलाई कल गर्न दिएन् ।’ उनलाई टिपर साहुले मलाई एकछिन टिपरमा सुत केहीबेरमा उज्यालो हुन्छ अनी बिहान सामान झारौंला बहिनी भनेर उनलाई विश्वास दिलाएका थिए ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
निदाउन लागेकी उनको पेटमा अचानक कसैको हात लाग्यो त्यसपछि… बीचमा टिपर हल्लिने भएको हुँदा सुत्न नसकेका उनका बच्चाहरु टिपर रोकिएपछि निदाएको पनि उनले बयान दिएकी छिन् । त्यसपछि साहुको कुरा सुनेर उनी सहचालक बस्ने ठाउँमा अगाडि टाउको राखेर सुत्न खोजिन् । समय बिहान साढे तीन भएको थियो । निदाउन लागेकी उनको पेटमा अचानक कसैको हात लाग्यो । त्यसपछि उनले आफ्नै बच्चाको खुट्टा होला भन्ने लागेको बताएकी छिन् ।
तर उक्त हात साहुको थियो, त्यसपछि उनले यस्तो के गर्नुभएको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले आफ्नो पेटबाट पटक–पटक ति साहुको हात हटाइन् । उनले विवाहित मान्छे भएर अर्को विवाहितमाथि किन यस्तो गर्नुभएको भन्दा ति साहुले विवाहित विवाहित हुँदा अझ सजिलो हुन्छ भनेका रहेछन् । उनले प्रतिकार गर्न खोज्दा टिपरको तल हा लेर सिध्याउछु भनेर चेता वनी दिएको पनि उनको बयानमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि उनले छातीतीर हात ल्याउने र आफ्नो नीजी अं गमा हात लगाउनेलगायत काम सुरुवात गरे.. महिलाका अनुसार त्यसपछि उनले छातीतीर हात ल्याउने र आफ्नो नीजी अं गमा हात लगाउनेलगायत काम सुरुवात गरेका थिए । बिहानको समयमा त्यो घटना हुँदा झण्डै ४ बजेको थियो । तर ति महिलालले त्यस्तो कुनै ठोस प्रतिकृया जनाइनन् । बिहान चिच्याउनुपर्ने क राएको भए कोही बचाउन आउँथे होला नि भन्ने प्रश्नमा उनी आफुलाई डर लागेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यदी उनी कराएपछि त्यहाँका मान्छेहरु आएनन् भने मलाई सिध्याउछ अनी बच्चाहरुको भविष्य के होला भनेर डराएर आफुले केही नगरेको भन्दै चुपचाप लागेको उनको भनाई रहेको छ ।
त्यसपछि पलास्टिकले दुई जनाले सामान ढाकेको ति महिला बताउँछिन् । उनका अनुसार सामाना ढाकेर आउँदै गर्दा उनलाई समातेर मुख थुनेर उनीमाथि… त्यो घटना भइरहेको थियो त्यो बीचमा अचानक पानी पर्यो । हात यताउता गर्ने ग लत कार्य कम्तीमा ५ मिनेट आसपास भएपछि पानी पर्यो । बीचमा साहुले महिलालाई उनको केही भिज्ने सामान छ कि नाँई भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि पलास्टिकले दुई जनाले सामान ढाकेको ति महिला बताउँछिन् । उनका अनुसार सामाना ढाकेर आउँदै गर्दा उनलाई समातेर मुख थुनेर उनीमाथि ग’लत काम भयो ।
गाडी साहुले उनको सुरुवाल खोल्न खोज्दा उनले आफुले दुई पटक आफ्नो सुरुवाल माथि तानेको बताएकी छिन् । तर अन्त्यमा उनको केही सिप लागेन र उनले आफुलाई साहुको जिम्मा लगाइन् । ति साहुले बच्चा बस्न दिन्न जरीपनि म बाहिर निकाल्छु भनेर त्यो सब काम गरेका थिए । बीचमा उनी आफैंले पनि बाहिर निकाल्नु बच्चा बसे ब’र्बाद हुन्छ भन्दै साहुलाई याद गराएकी थिइन् । सबै घ’टना भएपछि साहुले उनका भिनाजुलाई फोन गरेका थिए किनभने ति महिलाको मोबाइलमा रिर्चाज थिएन ।
साहुले फोन गरेपछि त्यहाँ पुगेका उनका भिनाजु, आमासहित सबैजना मिलेर सामान झारेको बताइएको छ । त्यो टिपर ५ बजेसम्म त्यहाँ भएको बताइएको छ । तर उनले इ’ज्जत र ज्यान बचाउनुपर्ने ड’रका का’रण कसैलाई केही भन्न नसकेको उनले बताइन् । सामान झारेर घरमा पुगेपछि बिहान उनलाई चालकले फोन गरेका रहेछन् ।
साहुले ति महिलासँग धेरै समय बिताएको भन्दै के हो घरमा गएर सुतेर बिहान मात्रै पठाएको हो कि क्या हो ? भन्दै फोनमा ति महिलामाथि नै चालकले प्रश्न गरे.. साहुले ति महिलासँग धेरै समय बिताएको भन्दै के हो घरमा गएर सुतेर बिहान मात्रै पठाएको हो कि क्या हो ? भन्दै फोनमा ति महिलामाथि नै चालकले प्रश्न गरेका रहेछन् । झण्डै १० बजे नजिक आफुले प्रहरीकहाँ जानुपर्छ भनेर सोचेको उनले बताएकी छिन् ।
मोटरसाइकललाई जोर विजोर प्रणाली लागू नहुने